मोबाइलको लतले बढ्दैछ बालविवाह र यौन अपराध!| Janachaso Khabar
- दान बहादुर सुनार
मोबाइल र इन्टरनेटको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटना पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । फेसबुक, इमो, मेसेन्जर, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतको दुरुपयोगले विभिन्न किसिमका अपराधिक घट्नाहरु बढ्दै गइरहेका छन् । विद्यालय जाने कलिला बालवालिकाहरुको हातमा पुस्तकको साटो मोबाइल देखिने गरेको छ । पढाई लेखाई भन्दा अत्यधिक समय उनीहरुले मोबाइलमा बिताउने गर्दछन् । विभिन्न किसिमका अनलाईन गेम खेल्न, फेसबुक चलाउन, गीत संगीत सुन्न र फिल्महरु हेर्नका लागि वालवालिकाहरुले मोबाइल र इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसरी मोबाइल र इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोगले वालवालिकाहरुको वानी व्यवहार बिग्रदै गइरहेको छ। कलिलो उमेरमै विपरित लिङ्गिसँग सामाजिक सञ्जालमा राती अबेरसम्म च्याट गर्ने, कल गर्ने जस्ता कार्यहरु बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता किसिमका गतिविधिहरुले अहिले हाम्रो समाजमा बालबिवाहका घट्नाहरु ह्वात्तै बढेका छन् । मोबाइल र इन्टरनेट नै बालबिवाह बढ्नुको मुख्य कारणको रुपमा अहिले देखा पर्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको अत्यधिक सक्रियताले यो उमेरका कलिला किशोर किशोरीहरु विपरीत लिङ्गिप्रति आकर्षित हुने, फेसबकुमा रिक्वेष्ट पठाइहाल्ने, च्याटमा कुरा गर्ने र त्यसैमा रमाउने र ख्याल ख्यालमै प्रेम प्रस्ताव राख्ने र अनन्तः विवाह गर्ने स्थितिसम्म पनि पुग्ने गर्दछन् । निजहरुको प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक प्रस्ताव घरपरिवारले स्वीकार नगर्दा उनीहरु उमेर नपुग्दै भागी विवाह गर्ने घट्नाहरु अत्यधिक बढ्ने गरेका छन् । कहिलेकाही यिनै बाल उपद्रव र दुष्प्रवृत्तिहरु नै अपराधिक मोडसम्म पनि पुग्ने गर्दछन् । एक अर्का विना बाच्न नसक्ने भनी कसम खाने, हात काट्ने र ज्यानै दिने जस्ता पागलपन प्रवृत्तिको कारणले पनि अपरिपक्व प्रेम सम्बन्धहरु अपराधिक घट्नाहरुमा परिणत हुने गर्दछन्। मोबाइलको लतले किशोर-किशोरी नजिकिने, यौन सम्बन्ध राख्ने र अतरंग तस्वीर तथा भिडियो खिची ब्लाकमेलिङ्ग गर्ने जस्ता अपराधिक घट्नाहरु बढ्दै गएका छन्। लभस्टोरी र अश्लिलता हुँदै पोर्नसाइटसम्म पहुँच बढ्ने गरेका कारण यौन अपराध र बलात्कारका घट्नामा बढोत्तरी भएका छन्।
मोबाइलको लतले बढाएको बालबिवाह:
नेपालको कानून अनुसार केटाकेटी दुबैको उमेर २० बर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइदैन । २० बर्ष नपुग्दै गरेको विवाहलाई वाल विवाह मानेको छ र यसरी विवाह गर्ने जोडी र विवाह गराउनमा भूमिका खेल्ने जोसुकैलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी मोबाइल र इन्टरनेटको लतले उमेर नपुग्दै प्रेम सम्बन्ध राख्ने र भागी विवाह गर्ने जस्ता कारणले बालबिवाहमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको पाउन सकिन्छ । अधिकांशहरुको त प्रेम सम्बन्धमा पनि दरार आई विभिन्न किसिमका अपराधिक घट्ना घट्ने गरेको पनि पाउन सकिन्छ । पढ्ने लेख्ने उमेरमा यस्ता गलत किसिमका गतिविधिमा संलग्न हुँदा प्रेमजालमा फस्ने, यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुने, प्रेममा धोका र सो पश्चातको हत्या, आत्महत्या जस्ता अपराधिक र दर्दनाक घट्नाहरुको चक्रव्युहमा पनि फस्ने गरेका छन् ।
लभस्टोरी र अश्लिलता देखि पोर्न भिडियोसम्मः
मोबाइल, इन्टरनेट र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले वालवालिकाहरुको प्राथमिकता पढाई भन्दा पनि गीत संगीत, फिल्म, फेसबुक, टिकटक लगायतका चिजहरुमा पर्ने गर्दछन् । अहिले फेसबुकमै विभिन्न किसिमका भिडियो तथा तस्वीरहरु आफै स्क्रिनमा देखिने गर्दछन् । युटुवरहरुले पनि लाइक र भ्युज बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका अश्लिल र प्रेम सम्बन्धका भिडियोहरु अपलोड गर्ने गरिएको पाइन्छ । किशोर किशोरीहरु पनि त्यस्ता भिडियोहरु बढी हेर्न रुचाउने र पछि पछि त्यहि नै लत बन्न पुग्दछ । पढाईमा रुचि नै नजाने, मोबाइल र इन्टरनेटमै घुस्न मन लाग्ने जस्ता समस्या देखिन थाल्दछन्। यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न हुँदै जाँदा विभिन्न लभ स्टोरी र मनोरन्जनको फिल्मबाट अश्लिलता तर्फ ध्यान केन्द्रित हुने र अनन्तः पोर्न साइट तथा फिल्महरुमा प्रवेश गरी भबिष्य नै धरापमा पर्न जान्छ।
कम उमेरमै हुने बालविवाहले निम्न प्रकारका समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
• शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखापर्ने ।
• कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा शिशु तथा आमाको ज्यान जोखिममा रहने र प्रजनन् स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखापर्ने ।
• विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुनुपर्ने ।
• पढाईमा अवरोधका कारणले कुनै उच्च पदमा पुग्न कठिनाई हुने र घरायसी काममै दिनचर्या वित्ने।
• शैक्षिक, आर्थिक अभाव लगायतको पीडाले जीवन नै धरापमा पर्न सक्ने र परिवार चलाउन गार्हो हुने ।
बालविवाहलाई न्यूनीकरण यसरी गरौँ:
• बालविवाह विरुद्ध समुदायमा सचेतना अभियानलाई जोड दिऔँ।
• बालबालिकाको सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गरौँँ।
• बाल विवाहले शिक्षा, स्वास्श्य र भबिष्यमा पर्ने असरका बारेमा सुसूचित गराऔँ।
• बाल क्लब र साथीहरु बीच बाल बिवाह अन्त्य सम्बन्धि छलफल चलाऔँ।
• बाल विवाह भएमा प्रहरीलाइ खबर गरौँँ र प्रहरीले पनि सजिलै उजुरी लिने गरौँ।
• दाइजो प्रथाका कारण भागी विवाह बढ्ने गरेकाले दाइजो प्रथालाई पूर्णतया अन्त गरौँँ ।
मुद्दा दर्ता प्रकृयालाई यसरी सहज बनाऔँ:
बालबिवाह सरकारवादी फौजदारी अपराध भएको र यस्ता मुद्दामा जोसुकैले पनि जाहेरी दिन सक्छन। सम्बन्धित घर परिवारका व्यक्ति र पीडित पक्षले जाहेरी दिए मात्रै दर्ता गर्ने र अन्यले दिएको जाहेरी नलिने प्रवृत्तिको अन्त गरौँँ। वाल विवाह भएको थाहा पाउने जोसुकैले पनि दिएको जाहेरी दर्ता गरौँँ र त्यसरी वाल विवाह गर्ने जोडी र विवाह गराउनमा भूमिमा खेल्ने सबैलाई पक्राउ गरी कारवाहीको दायरामा ल्याऔँ । कुनै एउटा गाउँमा एउटा जोडीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्यौ भने त्यो गाउँमा अरुले वाल विवाह गर्ने आँट गर्नै सक्दैनन् । तसर्थ वाल विवाह विरुद्ध डर पैदा गराउनका लागि भएपनि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा जोडिलाई भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याऔँ।
यौनअपराध र बलात्कारका घट्नामा वृद्धिः
मोबाइल र इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न फिल्ममा देखापर्ने अश्लिल दृश्य र गतिबधिबाट किशोर किशोरीहरुको मनोविज्ञान यौन क्रियाकलापतर्फ केन्द्रित हुन पुग्दछ । यसरी हुँदै गर्दा पोर्न साइटमा पहुँच वृद्धि हुन जान्छ । पोर्नसाइटमा अत्यधिक समय बिताउने किशोर किशोरीहरु कम उमेरमै विवाह गर्न प्रेरित हुनुका साथै पुरुष वा महिलालाई वस्तुको रुपमा हेर्न प्रवृत्ति बढेर जान्छ । जसले गर्दा बलात्कारका घट्नाहरु पनि बढ्दै गइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अश्लिल फोटो, भिडियो तथा मेसेज पठाई यौन प्रस्ताव राख्ने,दुःख हैरानी दिने र चरित्रहत्या गर्ने कार्य दिनानुदिन बढिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा खटपट भएपछि पुराना गोप्य तस्वीर तथा भिडियोहरु पोष्ट गरिदिने, शेयर गरिदिने लगायतका धम्की दिई ब्लाकमेलिङ्ग गर्ने गरी दुःख तथा हैरानी दिने गरिएको पाइन्छ। कतिपयले अर्काको फोटो दुरुपयोग गरी नक्कली आइडी बनाई अश्लिल हर्कत गर्ने, पैसा असुल्ने, पटक पटक यौन सम्बन्ध राख्न दवाव दिने गरिएको पाइन्छ । परपुरुष र परस्त्रीसँग सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, मेसेज तथा कलमा हुने अतरंग कुराकानीले नाजायज र अवैध सम्बन्ध रहने र तत् पश्चात वैवाहिक जीवनमा खटपट हुने गरेको पनि पाउन सकिन्छ । प्रेम सम्बन्धमा बसेपछि सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड एक अर्कालाई सेयर गर्ने भूल गरिन्छ । यसरी आइडी शेयर गर्दा सम्बन्ध बिग्रेपछि अर्काको आइडी चलाई अश्लील वा गोप्य मेसेज तस्वीर भिडियोहरु अरुलाई पठाउने र ब्लाकमेलिङ्ग गर्ने कार्य पनि गरिन्छ।
यौन अपराध, वलात्कार र बालविवाह बढ्नुमा मोबाइल र इन्टरनेट प्रमुख कारण हो । हामीहरु सबैले सचेत बनौँ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कोही कसैले पनि नगरौँँ। वालवालिकाहरुले पढाईको क्रममा विभिन्न जानकारीमूलक कुराहरु पत्ता लगाउन र थोरै मुड फ्रेसको लागि मात्रै मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोग गरौँ । जतिवेला नि त्यसैमा घुसी लत नविगारौँ । पढाईलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ । प्रत्येक अभिभावकहरुले पनि आफ्ना वालवालिकाहरुको गतिविधिको निगरानी राख्ने गरौँँ। सामाजिक सन्जालमा कसैलाई जथाभावी मेसेज गर्ने, अश्लिल तस्वीर तथा भिडियो पठाई हैरानी दिने काम कोही कसैले नगरौँँ । कसैले दुःख हैरानी र पीडा दिएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्युरोमा उजुरी दिऔँ । प्रहरी निकायले पनि जाहेरी दर्ता गर्ने प्रकृयालाई सहज बनाऔँँ । बालबिवाहका बिरुद्ध सचेतना अभियान चलाऔँ । अपराधमा संलग्न जोकोही जोडिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिशेष पहल गरौँँ । पहिला आफू सुध्रौ त्यसपछि सभ्य समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सबै जुटौँ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन बुझाउने त्यो बेलाको प्रशिक्षण
एमाले सिन्धुलीमा पुस्तान्तरण र अबको बाटो
जनचासो खबर| पुस ३०, २०७८ शुक्रबार
नेकपा एमालेले १० औँ महाधिवेशनमा सामना गरेको चुनैति
आरक्षण: भ्रम र वास्तविकता
जीवनमा सफल यसरी बनौँ, केही टिप्स !
जनचासो खबर| पुस २६, २०७८ सोमबार
उठेर लड्ने कि, लडेर उठ्ने ?
जनचासो खबर| पुस २४, २०७८ शनिबार